Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker 1.9.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.9.9 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
“Find My Kids” isafamily GPS tracker for child safety and parental control. You can connect GPS watch or install special program on child's phone.
Find my kids isatracking app for parents that will help you not to worry if your children are not with you and they don't hear your calls.
GPS locator – track the child’s location on the map and the history of movements for the day, make sure that your child doesn't visit dangerous places.
Sound around – listen to what is happening around your child, to feel certain that he is fine and inagood company.
Loud signal – sendaloud signal to the child’s phone if he left the phone inabackpack or turned on silent mode and doesn't hear the call.
Application Control – find out what apps they used in school, whether they played in the classroom instead of learning.
Security control – check that your child has come to school on time – get notifications when he comes to school, return home and other places, that you added manually.
Battery control – remind your child to charge the phone in time, the app will sendanotification if the battery is low.
Family chat – chat with your child in our app with funny stickers.
“Find my kids” app is intended for family safety and parental control only. The app cannot be installed on the phone secretly, the use is available only with the explicit consent of the child. Personal data is stored in strict accordance with legislation and GDPR policies
Install Chat with Parents app on your child’s phone – GPS tracker for the kid. In the Chat with parents app, your child will be able to chat with you, and in case of danger, could press the emergency button. Whenachild presses the SOS-button, you would immediately receivealoud alarm signal on your phone.
Connect it withareliable Find My Kids app withalocalized interface and technical support. The app is suitable for any device Smart Baby Watch, Smart Age Watch, Smart Pet Tracker, Smart Tracker, Wonlex, Titan Watch and similar
1) install the “Find my kids” app on your phone;
In case of technical problems, you can always contact our 24/7 support via chat in the app or send an email to support@findmykids.org.
- access toamicrophone - to send voice messages in the chat
"ကျွန်မကလေးတွေက Find" ကလေးကလုံခြုံမှုနှင့်မိဘ၏ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်မိသားစု GPS စနစ် tracker ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ GPS စနစ်လက်ပတ်နာရီနဲ့ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ကလေး၏ဖုန်းပေါ်မှာအထူးအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ငါ့အလေးတွေရှာပါသင်တို့၏သားသမီးသင်နှင့်အတူမပေးဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမကြားကြပါလျှင်စိတ်ပူဖို့မသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမိဘများအတွက်တစ်ဦးခြေရာခံခြင်း App ဖြစ်ပါတယ်။
GPS တည်နေရာ - သင့်ကလေးသည်အန္တရာယ်သောနေရာများသို့သွားရောက်မဟုတျကွောငျးသေချာအောင်, နေ့အဘို့မြေပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုများရဲ့သမိုင်းအပေါ်ကလေး၏တည်နေရာခြေရာခံ။
န်းကျင်အသံ - သူဒဏ်ငွေနှင့်အကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီသည်အချို့သောခံစားရရန်သင့်ကလေးပတ်လည်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ကြလော့။
အသံကျယ် signal ကို - သူကကျောပိုးအိတ်ထဲမှာဖုန်းကို left သို့မဟုတ်အသံတိတ် mode ကိုဖွင်နှင့်ခေါ်ဆိုခမကြားပါဘူးဆိုရင်ကလေး၏ဖုန်းကြီးသော signal ကိုပေးပို့ပါ။
လျှောက်လွှာထိန်းချုပ်ရေး - သူတို့စာသင်ခန်းအစားသင်ယူမှုအတွက်ကစားရှိမရှိ, ကျောင်းများတွင်အသုံးပြု apps အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာပါ။
လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှု - သင်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းကြောင်း, သူကျောင်းကမှကြွလာသောအခါအကြောင်းကြားစာများရအိမ်ပြန်နှင့်အခြားသောနေရာများ - သင့်ကလေးသည်အချိန်ပေါ်ကျောင်းကိုလာတော်မူကြောင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ဘက်ထရီထိန်းချုပ်မှု - ဘက်ထရီနိမ့်သည်ဆိုပါက app ကိုတစ်ဦးအကြောင်းကြားစာပေးပို့ပါလိမ့်မယ်, အချိန်အတွက်ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့သင့်ကလေးကိုသတိပေးတယ်။
မိသားစုချက်တင် - ရယ်စရာစတစ်ကာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ထဲမှာသင့်ကလေးနှင့်အတူ chat ။
"ငါ့ကလေးတွေကိုရှာပါ" app ကိုမိသားစုလုံခြုံမှုနှင့်သာမိဘထိန်းချုပ်ဘို့ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဒီ app ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလျှို့ဝှက်စွာ အသုံးပြုမှုကိုသာသူငယ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဥပဒေပြုခြင်းနှင့် GDPR မူဝါဒများနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်
ငါတို့သည်သင်တို့၏အချက်အလက်များ၏ privacy နဲ့လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ COPPA kidSAFE အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်အစီအစဉ်၏တရားဝင်လက်မှတ် အတည်ပြုထားတဲ့, အင်တာနက်ရက်နေ့တွင်, COPPA ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူသားသမီးရဲ့ကာကွယ်မှုအပေါ်ပညတ္တိကျမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို align ။
သင့်ကလေး၏ဖုန်းပေါ်မှာမိဘများ app ကိုအတူ Chat Install - ဆိတ်များအတွက် GPS စနစ် tracker ။ မိဘများ app ကိုအတူ Chat ကိုခုနှစ်တွင်သင့်ကလေးကိုသင်နှင့်အတူ chat နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အန္တရာယ်၏အမှု၌, အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ဦးဟာအရေးပေါ်-button ကိုတိုက်တွန်းသောအခါ, သငျသညျခကျြခငျြးသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကြီးသောနှိုးဆော်သံ signal ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင့်ကလေးကို GPS စနစ်-လက်ပတ်နာရီရှိပါက:
တစ်ဒေသတွင်း interface နဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြှနျုပျ၏ကလေးများ Find app ကိုအတူကချိတ်ဆက်ပါ။ ဒီ app တစ်ခုခုကို device ကိုစမတ်ကလေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, Smart ခေတ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, စမတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Tracker, Smart Tracker, Wonlex, Titan စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့်အလားတူအဘို့သင့်လျော်သည်
ထောက်ခံ GPS စနစ်-လက်ပတ်နာရီများစာရင်း:
Q50, Q60, Q80, Q90, Q100, Q360, Q523, Q730, Q750, Q8, GW100, GW100S, GW200, GW200S, GW300, GW300S, GW400S, GW600X, GW600S, GW600S, GW600S; GW1000S, EW100, EW100S, EW200, K911, W8, W9, w10, Y3, G36, SAFE ဂိုးသမား, DS18, T58, T100, i8, G10, G100, D99, D100, D100S, Titan စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Q50 ဂျီပီအက်စ်ကိုခြေရာခံ, စမတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Tracker , စမတ် tracker S01, A1, Aimoto, Aimoto Start ကို, Aimoto အားကစား, Aimoto သမုဒ္ဒရာ, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ w10, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Q360, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ GW200S, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ GW300, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Q50, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Q50, LoLexi စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့။
ဘယ်လိုကျွန်မရဲ့ကလေးတွေက app ကိုအလုပ်ရှာပါပေ:
1) သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ရှိ "ငါ့ကလေးတွေကိုရှာပါ" app ကို install;
2) သင်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုချင်တာတွေ device ကိုရှေးခယျြ: ကလေး၏ဖုန်းသို့မဟုတ် GPS စနစ်-လက်ပတ်နာရီ;
3) ကလေး၏ဖုန်းပေါ်မှာက "Chat မိဘများနှင့်အတူ" app ကို install လုပ်ပါသို့မဟုတ် GPS စနစ်ထည့်သွင်း SIM ကဒ်အရေအတွက်ကစောင့်ကြည့်
နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အမှု၌, သင်အမြဲတမ်း app ထဲမှာချက်တင်ကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 24/7 support ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် support@findmykids.org အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။
သင်ကကလေး၏ device ကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်စမ်းသပ်ကာလအတွင်းအခမဲ့များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ အခမဲ့ဗားရှင်း၌ဤကာလ၏အဆုံးမှာသင်အွန်လိုင်းကလေး၏တည်နေရာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအပေါငျးတို့သ functions တွေသုံးစွဲဖို့အပြီးစာရင်းသွင်းခြင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ကလေးများ app ကိုအောက်ပါခွင့်ပြုချက်တောင်းကိုရှာပါ:
- ကင်မရာနှင့်ဓာတ်ပုံရယူသုံးစွဲနိုင် - ကလေး၏ကိုယ်ပွားတပ်ဆင်ရန်
- အဆက်အသွယ်မှဝင်ရောက်ခွင့် - ဂျီပီအက်စ်-လက်ပတ်နာရီအတွက်ဖုန်းစာအုပ်အတွင်းဖြည့်ဖို့
- တစ်မိုက်ခရိုဖုန်းမှဝင်ရောက်ခွင့် - ထိုချက်တင်အသံမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker အား အခ်က္ျပပါ
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.9.9
ထုတ်လုပ်သူ Line App
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://findmykids.org/offer/pp_mixed.pdf
App Name: Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker
Release date: 2019-08-13 19:54:05
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: x86, x86-64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a
လက်မှတ် SHA1: 2A:57:77:7E:3B:94:91:A3:73:92:AF:CE:2E:69:D0:30:DB:F9:50:37
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Nikolay Kuznetsov
နယ်မြေ (L): Perm
Find My Kids: Child GPS-watch & Phone Tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ